Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Shiinaha » Hoteelka ugu sarreeya adduunka ayaa laga furay Shanghai, Shiinaha
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Shiinaha • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Investments • Wararka Raaxada • News • jiga • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Ku faanista makhaayad ku taal dabaqa 120aad iyo adeegga saacadaha shaqsiyadeed ee 24-saac, hudheel raaxo leh ayaa fadhiya dabaqyada sare ee 632-meer (2,073 feet) Shanghai Tower.
Hoteelka ugu sarreeya adduunka ayaa laga furaa dhismaha labaad ee ugu dheer adduunka ee Shiinaha.
Martidu waxay ku raaxeysan karaan toddobada makhaayadood ee hudheelka, baararka, hudheellada dabaasha iyo dabaqa 84aad.
Habeenkii "J Suite" qiimahiisu waa in ka badan 67,000 yuan ($ 10,377).
Huteelka “ugu sareeya” raaxada adduunka ayaa laga furay albaabka dhismaha labaad ee ugu dheer adduunka kadib kii Dubai Burj Khalifa, magaalada Shanghai, Shiinaha.
Ku faanista makhaayad ku taal dabaqa 120aad iyo adeegga saacadaha shaqsiyadeed ee 24-saac, hudheel raaxo leh ayaa fadhiya dabaqyada sare ee 632-meer (2,073 feet) Magaaladda Shanghai degmada maaliyadeed ee magaalada.
Wiishka ayaa martida ku leh jeebado dhaadheer iyo madax kor u qaadaya dhismayaasha dhaadheer ee cabsi-gelinaya ee xawaaraha dhegaha ee 18 mitir ilbiriqsi illaa iyo hudheelka J165 ee XNUMX qolal.
Furitaanka hoteelka waxaa daahiyay CUDURKA 19-aad ee faafa laakiin hada wuxuu bilaabay inuu qaabilo marti caafimad fiican leh oo u soo wici kara adeega khamri bixiye heegan ah saacad kasta, maalin iyo habeenba.
Martidu sidoo kale waxay ku raaxeysan karaan mid ka mid ah toddobada makhaayadood ee hudheelka, baararka, hudheellada, barkadda dabaqa 84-aad, iyo dhammaan waxyaabaha kale ee caadiga ah ee hudheelka ugu sarreeya.
Dabcan, raaxada noocan oo kale ah kuma imaaneyso mid raqiis ah. Si loogu dabbaaldego furitaankeeda J Hotel wuxuu bixinayaa “qiime khibrad gaar ah” oo ah 3,088 yuan ($ 450) habeenkii, laakiin qiimaha 34-kiisa qol ayaa kor u kacaya.
Habeen ka mid ah "J Suite", oo ay ku buuxsan yihiin aaladaha muraayadda iyo sawnada, Sabtidan ayaa qiimaheedu ka badan yahay 67,000 yuan ($ 10,377).
Hoteelka ayaa ka mid ah Jin Jiang International Hotels, oo ah koox weyn oo ay leedahay dowladda Shiinaha, waxaana si rasmi ah loo furay Sabtidii.